Ahoana ny fomba hiarahana amin'ny olona manana olana amin'ny fitokisana: 6 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t - Fifandraisana
Ahoana ny fomba hiarahana amin'ny olona manana olana amin'ny fitokisana: 6 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t
Ny olona dia mamorona olan'ny fahatokisana noho ny antony maro.
Mety hanomboka amin'ny fahazazany izany, toerana nahalehibe tao an-trano izay tsy azon'izy ireo natokisana ny ray aman-dreniny na ny olo-malaza hafa.
Mety hitranga izany amin'ny maha olon-dehibe azy, izay olona tafavoaka velona amin'ny fanararaotana ao an-trano na toe-javatra mampivadi-po hafa izay namela fahatsapana maharitra ho azy ireo.
Sarotra ny mampiaraka olona manana olana amin'ny fifampatokisana satria mety hanana fihetsika tsy ampoizina amin'ny toe-javatra tsy misy dikany izy ireo. Izay tsy dia olana toa anao dia mety ho olana goavana ho azy ireo satria manohina ny sasany amin'ireo ratram-piainany taloha.
Io kosa no mahatonga azy ireo ho tezitra na hiahiahy ny amin'ny fihetsikao ao anatin'ny fifandraisana misy ankehitriny.
Tsy maintsy mianatra ny fomba fitetezana ireo toe-javatra ireo ianao raha te hahomby ity fifandraisana ity. Andeha isika hijery torohevitra vitsivitsy momba ny fomba ahafahanao mampiaraka amin'ny fomba mahomby amin'ny olona iray manana olana amin'ny fitokisana.
1. Mila manam-paharetana ianao.
Ny olona naratra tamin'ny lasa dia mazàna no tsy hahita fotoana hanokafana sy hatokisana amin'ny ho avy.
Karazana fomba mandeha ihany io. Mikasika fatana ianao ary mirehitra dia hitandrina ianao ny amin'ny mikasika io fatana io indray, marina?
Toy izany koa no atao amin'ny fifandraisana am-pitiavana. Manambola be dia be amin'ny tenantsika, ny fotoanantsika, ny herintsika ary ny fiainantsika manokana isika ao anatin'ny fifandraisana iray izay mety handratra mafy azy io rehefa miharatsy ny raharaha.
Ary tsy vitan'ny hoe, 'Eny, tsy nandaitra isika.' Izany dia eo amin'ny sehatry ny fanararaotana tafavoaka velona, ​​ny fitiavana olona iray nanodikodina azy ireo, na ny fiatrehana ny fahalavoan'ny famitahana.
Mila manam-paharetana amin'ilay olona ianao satria mety hiteny izy ireo ary hanao zavatra noho ny fiarovan-tena izay mety tsy ho toy izany daholo.
Mila fotoana izy ireo hahitanao fa matotra amin'ny fifandraisana ianao ary mamela ny tenany hisokatra kely.
2. Mila mahatakatra ianao fa tsy afaka manamboatra ny lasa.
Betsaka loatra ny olona eto amin'izao tontolo izao izay tsy mahatsapa fa ny fitiavana sy ny fifandraisana dia tena tsy milalao toy ny sarimihetsika…
Ny hany ilainao dia fitiavana! Mandresy ny rehetra ny fitiavana! Madio tokoa io fitiavana io ka azo antoka fa hahazo aingam-panahy ho tsara kokoa izy ireo!
Tsy dia toy izany ny fandehany. Raha nanao izany dia tsy ho be ny olona misaona ny havany very ankehitriny.
Ny zava-misy dia ny olona manana olana amin'ny fifampitokisana dia manana olana amin'ny antony iray. Ary raha tafavoaka velona amin'ny zava-maharikoriko sasany izy ireo tamin'ny fiainany, ny fitiavana dia tsy hanamboatra ny fahavoazana naterak'izany toe-javatra izany. Izany no ilàna ny fitsaboana sy fomba fanao fanatsarana tena isan-karazany.
Tsy midika izany fa voaozona amin'ny fifandraisana ratsy na amin'ny fiainana tsy sambatra izy ireo. Tsia mihitsy.
Ny tsirairay fotsiny tafiditra ao amin'ny fifandraisana dia mila mahatakatra fa mila mihoatra ny fitiavan'ny olon-kafa ny manamboatra ireo ratra ireo. Mila ezaka manokana izany, angamba miaraka amin'ny fanampian'ny matihanina amin'ny fahasalamana ara-tsaina.
3. Mila mianatra tsy mandray zavatra manokana ianao.
Hisy ny fipoahana sy ny ady hevitra izay tsy misy dikany aminao. Mety ho voampanga amin'ny zavatra tsy nataonao ianao, manontany tena momba ny fahamarinanao sy ny tsy fivadihanao, ary avela ho moana ianao noho ny sasany amin'ireo lozisialy lozika hiainanao.
Tokony hianatra ny tsy hitondra ireo zavatra ireo manokana ianao. Ny olona manana olana amin'ny fitokisana izay tezitra amin'ny somary tsikaritra dia tsy manao fihetsika feno lolompo aminao. Izy ireo dia mamaly ny antony mampihetsi-po amin'ny zavatra niainany teo aloha.
Aza adika ho toy ny fanafihana manokana ny fahamendrehanao izany. Raha tsy izany dia hitodika haingana any amin'ny fifamaliana izay tsy mandeha mankaiza ny raharaha.
Ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manatsara ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fametrahana fanontaniana, mamporisika azy ireo hiresaka momba ny zavatra tsapan'izy ireo, ary hanazava ny momba anao araka izay azonao atao.
Raha olona mahay mandanjalanja izy ireo dia ho hitany ihany ny marina, na dia rendrika ao anaty hatezerany aza izy ireo amin'izao fotoana izao.
4. Asehoy ny fahamendrehana amin'ny alàlan'ny fanarahana.
Ny fomba tsara indrindra hanehoana ny fahatokiana dia ny fanarahana ny zavatra nataonao sy ny safidinao.
Raha milaza ianao fa hiantso amin'ny 5ora hariva dia miantso amin'ny 5 hariva. Raha manaiky ny hihaona amin'ny fisotroana amin'ny asabotsy ianao dia alao antoka fa eo ianao hihaona amin'ny fisotroana amin'ny asabotsy.
Raiso ho toy ny fatorana ny teninao satria izany dia. Izay lazainao fa hataonao dia ataovy.
Io firaketana an-tsoratra ny fanaovana izay lazainao fa tianao sy ny fijanonanao amin'ny fanambaranao io dia zavatra azo tsapain-tanana azon'ny olona iray manana olana amin'ny fitokisana.
Ny fahatahorany na ny fanahiany dia mety hilaza amin'izy ireo fa misy zavatra tsy mety tokoa na mety ho ratsy izany. Na izany aza, fantatr'izy ireo fa afaka matoky anao izy ireo satria nasehonao matetika fa azo atokisana sy azo itokisana ianao.
Mazava ho azy, mitranga ny zavatra. Indraindray tsy manana safidy hafa ankoatry ny manapotika ny volavolainay izahay satria tonga ny asa na nofoanana ilay mpitaiza tamin'ny minitra farany. Mitranga ny fiainana.
Ny hany mila ataonao dia ny maka ny telefaona, miantso azy ireo ary ampahafantaro azy ireo izay mitranga. Aza avela mihantona izy ireo na manontany tena hoe inona no ataonao. Izany dia hanimba ny fiezahana rehetra hananana fahatokisana.
manambady fa tia olon-kafa
5. Andraso fa mila fanomezan-toky matetika izy ireo amin'ny voalohany.
Tsy fahita amin'ny olona manana olana amin'ny fitokisana ny mitaky fanomezan-toky be rehefa vao tafiditra anaty fifandraisana izy ireo.
Izy ireo dia mitady hibanjina ny tahotra sy ny tebiteby izay mbola manintona azy ireo tamin'ny zavatra niainany taloha izay nahatonga izany tsy fahazoana aina izany.
Aza gaga raha mijery anao noho izany fampiononana izany ilay olona mampiaraka.
Amin'ny ankapobeny, io karazana zavatra io dia hihena rehefa mandeha ny fotoana bebe kokoa ary mahazo aina kokoa izy ireo amin'ny fiarahana. Mety mbola hipoitra tsindraindray io, saingy azo inoana fa tsy ho henjana toy ny tamin'ny voalohany.
Ity karazana toky tokana ity dia mety ho hafa noho ny tsy ampoizinao. Mety ho amin'ny endrika dinika famakafakana tafahoatra, famakiana eo anelanelan'ny andalana hitadiavana ny toe-javatra izay tsy misy, na manontany ny antsipiriany rehetra amin'ny andronao.
Averina indray fa mila faharetana ianao hiasa amin'ireo zavatra ireo amin'ilay olona.
6. Andraso hivoatra miadana ny fifandraisana.
Ny olana atokisana dia tsy hita tampoka fotsiny. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, matetika izy ireo dia vokatry ny toe-javatra maharary eo amin'ny fiainana, toy ny fanararaotana zaza tsy ampy taona, fanararaotana ao an-trano, na tsy fivadihana.
Ny olona manana olana amin'ny fifampitokisana dia manana ireo sakana tsy hiarovany tena toy izany indray.
Mety ho ilay endrika faniriana tsy dia mahazatra fotsiny, tsy misy tadiny mifamatotra, eny fa na dia ireo namana manana karazana tombontsoa azo avy amin'ny fifandraisana amin'ny hafa aza.
Amin'ny fifantohana hatrany amin'ny lafiny ara-batana kokoa amin'ny fifandraisana, dia tsy mila manao izay hahatonga azy ireo marefo izy ireo amin'ny alàlan'ny fanokafana ny tenany amin'ny fanaintainana mety hitranga amin'ny namana mpisoloky.
Na izany aza, rehefa manapa-kevitra ny hiditra amina fifandraisana vita fanoloran-tena io olona io dia mety hitaky fotoana lava kokoa noho ny olona tsy manana olana amin'ny fifampitokisana izy ireo te hiampita fetra sasany.
Mety ho sarotra amin'izy ireo ny mampiharihary ny faritra lalina sy lalina amin'ny tenany. Mety tsy ho azon'izy ireo atao ny milaza aminao fa tia anao izy ireo mandra-pahatongan'ny fanambadiana. Izy ireo koa dia mety hihazona ny fanekena mafy sy ny zava-bita lehibe, toy ny fihaonana amin'ny ray aman-dreny, ny fiaraha-mientana, na ny fandaminana lalina loatra amin'ny ho avy.
Tsy midika izany fa tsy hanao ireo zavatra ireo izy ireo. Mety mila fotoana fanampiny hankanesana any izy ireo.
7. Fantaro ny fetra sy fetranao manokana.
Indraindray ny olona manana fitokisana dia miampita tsipika tsy tokony hiampitana amin'ny fifandraisana. Misy zavatra vitsivitsy ihany izay tsy mety fa tsy dia misy loatra ny fitokisana ary bebe kokoa momba ny fifehezana.
Tsy mahafinaritra ny mitaky fidirana feno amin'ny telefaoninao, manara-maso ny toerana misy anao amin'ny alàlan'ny fampiharana iray, mitaky onjan'ny toerana misy anao sy ny olona niara-niasa aminao.
Etsy ankilany, indraindray ny sasany amin'ireo zavatra ireo dia mety ho mitombina. Tsara, naman'ny sakaizanao taloha ianao, saingy tsy mety kely ny mijanona alina any an-tranon'izy ireo amin'ny antony rehetra. Toe-javatra mety hampiahiahy izany.
Ny olona sasany dia mampiasa ny olan'ny fitokisany ho antony hanararaotana mifehy ny sakaizany, izay tsy salama na tsara. Mety tsy zavatra mampidi-doza akory izany, mamaly fotsiny ny tahotra sy ny fitaintainany fotsiny izy ireo, saingy tsy mahomby izany.
Mety fotsiny fa tsy nanana fotoana ampy na nanao asa ampy hanasitranana ny ratr'izy ireo izy ireo mba hanandramana hanana fifandraisana akaiky amin'olona. Tsy maninona koa.
Amin'izany karazana toe-javatra izany dia te ho mazava ianao momba ny fetra sy fetranao manokana, ny zavatra tianao avelanao heloka fa tsy.
Angamba izy ireo nijery tamin'ny alàlan'ny findainao tamina fotoana malemy, nahatsapa ho mahatsiravina amin'izany, ary niaiky fa nanitsakitsaka ny fiainanao manokana. Izany dia azo avela lavitra kokoa noho ny mandany volana misimisy ary avy eo tezitra aminao rehefa manana olana amin'izany ianao.
Raha mahita ny tenanao amin'ity toe-javatra ity ianao dia tsara ny mitady fanampiana amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana. Ity antoko fahatelo tsy miandany sy manam-pahalalana ity dia ho afaka hanampy anao hametraka ny fetranao ary hahatakatra raha mangoraka ny olan'ny namanao ianao na raha manararaotra anao izy ireo. Mety ho tsipika tena tsara izy io indraindray.
Ho an'ny fanampiana sy torohevitra amin'ity karazana ity dia amporisihanay ny serivisy an-tserasera an'ny Relationship Hero. Azonao atao ny miresaka manokana amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana mba hikarakara tsara kokoa ireo olana marefo sy fahasarotana mety hitranga amin'ny fiarahana amin'ny olona manana olana amin'ny fifampitokisana. hiresaka amin'ny olona iray na handamina fivoriana ho an'ny daty manaraka.
Zavatra 13 izay ataon'ny sipa sy sipa manana (+ ny fomba hiatrehana azy ireo)
Famantarana 11 an'ny lehilahy tsy matoky tena (+ Torohevitra hiatrehana ny iray)
Ahoana ny fomba itiavana olona iray misy olan'ny fandaozana: toro-hevitra 8 lehibe
Mampiaraka amin'ny olona manana ahiahy: zavatra 4 tokony hatao (sy 4 tsy tokony hatao)
Famantarana sipa sipa / sipa marolafy 9 (+ Ahoana no fomba hiatrehana azy ireo)
ny fomba hiatrehana ny maha ratsy tarehy
midika hoe tsy mivadika amin'ny fifandraisana
ny vadiko tsy miresaka amiko
haingana be loatra amin'ny fifandraisana
inona no hatao rehefa fantatrao fa mandainga ny olona iray
ny fomba famaranana ny namana amin'ny tombony ary mijanona ho mpinamana